တော်နှင်းဆီတွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဦးဆောင်သူ ကိုကျော်နိုင်ဦးကို RFA မှ မေးမြန်းခြင်း..။
မင်းတို့ဉာဏ်အမြင် တစ်မိုက်တစ်ထွာမျှရယ်နဲ့ ငြင်းဖို့သန်လျှင် မိုက်ရာကျပါလိမ့် . . . မောင်သွေးချွန်း )
သူတို့ ပြန်လာကြလေပြီ။ သူတို့ဆိုတာ 'ကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့'လို့ ပြောနိုင်တဲ့ ABSDF အဖွဲ့ကြီးရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းများဖြစ်ကြတဲ့ ဒေါက်တာနိုင်အောင်၊ ကိုမိုးသီးဇွန်နဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့ အပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ လူတစ်စုပါပဲ။ သူတို့ဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလဆန်းမှာ ပြည်တော်ပြန်လာကြတယ်။ သူတို့ကို ခရီးဦးကြိုပြုလိုက်တာကတော့ '၉၂ ပါဂျောင် ရှင်းတမ်း' ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်မှာ အေဘီမြောက်ပိုင်းပြန် ရဲဘော်များက ၁၉၉၂ ပြည်ထောင်စုနေ့ လူသတ်ပွဲ ကြီးအကြောင်းကို '၉၂ ပါဂျောင်ရှင်းတမ်း'အဖြစ် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မြောက်ပိုင်းဒေသက ABSDF အတွင်း ကျောင်းသားစစ်စစ်တွေကို 'ထောက်လှမ်းရေး'လို့ စွပ်စွဲပြီး ငရဲသားတွေက အဘခေါ်ရလောက်အောင် နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်း သတ်ဖြတ်ခဲ့ပုံတွေကို ကျွန်တော်တို့ ကြားသိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရရင် ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးအပြီး ကျောင်းသားတွေ တောခိုသွားခဲ့ကာ ABSDF အဖွဲ့ ပေါ်လာပုံကစပြီး ABSDF
ဖရိုဖရဲ ပြိုကွဲသွားပုံအထိ ကျွန်တော်တို့ မျက်ခြည်မပြတ်ခဲ့ပါ။
၉၂ ပါဂျောင်ရှင်းတမ်းရဲ့ နိဒါန်းအစလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ ပန်းချီထိန်လင်းရဲ့ 'ကျွန်တော် လူကက်ဆက်' ရင်ဖွင့် ဖော်ထုတ်ချက် စာတမ်းကို ၁၂ဖေဖော် ၀ါရီ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နေ့စွဲနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်က ရခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ Popular News ဂျာနယ်နဲ့ Messenger ဂျာနယ်တွေမှာ တရားဝင်ဖော်ပြလာတာ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ပန်းချီထိန်လင်း ကောက်ကြောင်း အပိုင်းအစမျှ ခြစ်ရာပေးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာ စုတ်ချက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ သွေးရောင်လွှမ်းတဲ့ အနိဋ္ဌာရုံ ရုပ်ပုံများအဖြစ်'အောင်မိုးဝင်းရေးတဲ့ မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများကို'ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ရင်တလှပ်လှပ် စုတ်တသပ်သပ် ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒေါက်တာ နိုင်အောင်တို့ မိုးသီးဇွန်တို့က ထိုင်းမှာလည်း ဗမာတွေ ငါးသန်းလောက်လာပြီး အလုပ်လုပ် နေတာပဲတဲ့။ ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီဗမာငါးသန်းက ယိုးဒယားမှာ ပြည်နယ် မတောင်းပါ။ ရိုဟင်ဂျာတွေက ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောကို လွှမ်းမိုးထားသလို မဲဆောက်ကို အပိုင်ကြံဖို့ စိတ်နဲ့တောင် မပြစ်မှားပါ။ ယိုးဒယားရွာတွေကို မီးမရှို့ပါ။ ယိုးဒယားတွေကို မသတ်ပါ။ လုပ်ခလစာ မှန်မှန်ရဖို့တောင်
ရုန်းကန်နေရရှာတဲ့ ရွှေဗမာတွေပါ။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ စကားတစ်လုံး ပြောတတ်ရုံနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ တိုင်းရင်းသားအရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ရိုဟင်ဂျာအရေးတွေကို ဘယ်လိုပါဝင်ဖြေရှင်းမှာလဲလို့ မေးလိုက်ချင်ပါတယ်။
Posted by ခွပ်ဒေါင်းအော်သံ at 9:34 PM No comments:
Posted by ခွပ်ဒေါင်းအော်သံ at 10:37 PM No comments:
ဘယ်သူ မဆို မင်းသားဖြစ်ချင်တယ်. . .
ပြည်တော်ပြန် ABSDF ခေါင်းဆောင်ဟောင်း နှစ်ယောက်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ရေးသားဖေါ်ထုတ်မှုတွေ ကို လုပ်တာဟာ ခုချိန်မှာ လုပ်သင့်ရဲ့လား၊ သူတို့နဲ့ ညီညွတ်ရေး မလိုဘူးလား လို့ မိတ်ဆွေတယောက်က စာပို့ပါတယ်။
ကျနော်က သူတို့နိုင်ငံရေး ဇာတ်ခုံပေါ်ပြန်တက်လာ၊ အခွင့်ရေး ယူလာမှာစိုးလို့ လို့ ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။
တကယ် တော့ ကျနော် ကိုနိုင်အောင် နဲ့ မဆုံဖူးပါဘူး။ ကိုမိုးသီးနဲ့ကတော့ ၈၈-၈၉ ကာလမှာလည်း အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ခုလည်း ပြန်ဆုံတယ်။ ခင်မင်ရင်းစွဲလေးလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သမိုင်းဆိုတာ ခင်မင်ရင်းစွဲနဲ့ သာစေ၊ နာစေ ရေး ရတာ မဟုတ်ဘူး လို့ ကျနော် ခံယူထားပါတယ်။
သူတို့ဟာ ဒီမိုကရေစီ သမားတွေ မဟုတ်ဘူးလား၊ သူတို့ကို တိုက်ရင် ကြံ့ဖွံ့က အမြတ်ထုတ်သွားမှာပေါ့ လို့ တယောက်က ထောက်ပါတယ်။ ကျနော့်အမြင်မှာ ကြံ့ဖွံ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီမိုကရေစီသမားပဲ ဖြစ်ဖြစ် တိုင်းပြည် ကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်တာ လူတဦးချင်းတယောက်ချင်းရဲ့ စိတ်ဓါတ်၊ အကျင့် စာရိတ္တ၊ ခံယူချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။ ကျနော်အကြောက်ဆုံးကလည်း မြန်မာ့သမိုင်းစာမျက်နှာမှာ တိုင်းပြည်လွတ် လပ်ရေးအတွက် ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ လူငယ် ၃၀ ထဲ ဗိုလ်နေ၀င်းလို့ အခွင့်အရေး သမား တယောက်ပါသွားတဲ့အတွက် ခုချိန်ထိ မဆုံးနိုင်တဲ့ ဆိုးသံသရာမျိုး ထပ်ဖြစ်မှာကိုပါပဲ။
နောက် ဒီဖြစ်ရပ်တွေ သာ မက၊ ဘာကြောင့် အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် နှစ်ခြမ်းကွဲ ခဲ့ရတယ်၊ နိုင်ငံရေး ကို ဖြောင့်မတ်သန့်ရှင်းစွာ လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိဘဲ နည်းမျိုးစုံနဲ့ကလိမ်ကကျစ် လုပ်တတ်တာ ဒါတွေဟာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ဒါတွေကြောင့် ခုချိန်ထိ သမိုင်းရဲ့ အမွေဆိုးကို ရင်ဆိုင်နေရတာ။ ဒါကြောင့် ဒီလိုလူတွေရဲ့ လုပ်ရပ် တွေကို ကျနော် ဖေါ်ထုတ်ဖို့ကို လိုပါတယ်။
ကျနော်လေ့လာထားသမျှကို ပြတ်ပြတ်သားသားပြောရမယ် ဆိုရင် မြောက်ပိုင်း၊ တောင်ပိုင်း လူသတ်မှုတွေ မတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုတွေ နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ဒေါက်တာနိုင်အောင် တို့ ဘက်က အဲဒီကာလဗဟိုကော်မီတီတွေ တာဝန်ယူဖြေရှင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ပိုင်း ဖမ်းဆီးမှုတွေဟာ တကယ့်ကို အာဏာလုပွဲတွေလို့ပဲ ကျနော်သုံးသပ်မိသလောက် ပြတ်ပြတ်သားသား ရေးပါတယ်။ မကြာခင် ဆရာကိုနေ၀င်းအောင် နဲ့ ကိုထင်ကျော်တို့ရဲ့ အင်တာဗျူးမှတ်တမ်းတွေကို ဆက်တင်ပါ့မယ်။ အဲဒီထဲမှာ လူမဆန်ဆုံးက တဦးတည်းသော အကျဉ်းသူ မမီမီခိုင်ကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အဓမ္မကျင့် စော်ကားခဲ့တာ။ နှိပ်စက်ခဲ့တာ။ နောက်တော့ မှားလို့ဆိုပြီး အန်န်အယ်လ်ဒီက ပြန်ခေါ်ထုတ်သွားခဲ့တာ။. . မမီမီခိုင်ကို ခုချိန်ထိ ကျနော် မမြင်ဖူးသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် သူနေခဲ့၊ သွားခဲ့ တဲ့ နေရာတွေက ကြားရသလောက် လပြည့်လကွယ်တွေမှာ စိတ်တွေ ဂယောင်ချောက်ခြား ဖြစ်ရတာ၊ တွေ့ရာယောက်ျားတွေ ခြေတော်တင်ခံရတာ ဟာ စိတ်နာစရာကြီးဗျာ။ ပညာတတ်အမျိုးကောင်းသမီးလေး တဦး ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးသမားတွေ လို့ နာမည်ခံထားတဲ့ သူတွေ ဖျက်ဆီးတာကြောင့် ဘ၀ ပျက်သွားရတာ။ ဒီလိုပဲ ကိုမြင့်ဦးဆိုတဲ့ လူငယ်လေးဟာ ထိုင်းကို နွားတွေ ကျောင်းပို့ရင်း ကျောင်းသားတပ်မတော် ဆိုတဲ့ နာမည်ကြီး နဲ့ ၀င်လာခဲ့တာပါ။ သူဟာ မြန်မာစာတောင် ရေးတတ်၊ ဖတ်တတ်တဲ့ သူမဟုတ်ပဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့ကိုလည်း ထောက်လှန်းရေး လို့ စွပ်စွဲ ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ ဒါတွေကို ဒေါက်တာနိုင်အောင်တို့ အနေနဲ့ မသိဘူး၊ ငြင်းလို့မရဘူး။ ရှင်းကို ရှင်းဖို့လိုပါတယ်။
အဲဒီ ပြဿနာမျိုးတွေဟာ လက်နက်ကိုင်တဲ့ တောထဲကိုရောက်သွားတာပါပဲ။ ညီလာခံကွဲ ရ တာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာ အသေးစိတ် ဆရာကိုနေ၀င်းအောင် က ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဆရာကိုနေ၀င်းအောင် ဟာ ပြောရရင် မိုးသီးဇွန်ရဲ့ လူရင်းပါ။ မိုးသီး တာဝန်ပေးမှုအရ မြေပေါ်တာဝန်ခံအနေ
နဲ့လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ညီလာခံမှာ မိုးသီးရဲ့ စည်းမျည်းစည်းကမ်း ကို မထေမဲ့မြင်လုပ်မှုတွေကို စိတ်ပျက်လွန်းလို့ အေဘီ အကွဲမှာ နိုင်အောင် ဘက် အခြမ်းကို ရပ်ခဲ့တယ် တဲ့။ မိုးသီးဇွန်ဟာ လူတဘက်သားကို မဟုတ်က ဟုတ်ကလုပ်ကြံတိုက်ခိုက်တတ်တယ်။ နောက် သူနိုင်ဖို့ ရိုးရိုးသားသား မကြိုးစားဘဲ အောက်လမ်း၊ အထက်လမ်း လမ်းပေါင်းစုံနဲ့ လုပ်တတ်တယ်။ ညီလာခံမှာ ဗိုလ်ချုပ်မြ ကိုပါ ခေါ်ပြီး သူ ဥက္ကဌ ဖြစ်ရေး ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။
ညီလာခံမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ကိစ္စ အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ် ဆွေးနွေးမှုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ စစ်ရေးလမ်းစဉ်ဆွေးနွေးမှု အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး အဆင့် ရွေးချယ်နေရာချထားရေးအခန်းကဏ္ဍမှာ ကွဲကြတာပါ။ နေရာ.. အတွက် ကွဲကြတာပါ။
ကွဲပြီး ပြန်ညှိတော့လည်း ဘယ်လိုမှ ကို စည်းမျည်းစည်းကမ်းနဲ့မညီတာတွေ ပြောပြီး ကို ညှိတဲ့အတွက် ပေါင်းစည်းလို့ကို မရခဲ့တာပါ။
ကဲ. . .ဒါတွေဘယ်လို ဖြစ်ရတယ် ဆိုတာ အသေးစိတ်ကို တင်ပါ့မယ်။
ဒါမျိုး လုပ်ပြီး မှားခဲ့တဲ့အမှားတွေ အတွက် ပေးဆပ်ပြီး၊ တိုင်းပြည်အတွက် တကယ်ကောင်းအောင် လုပ်ရင် ကျနော် ထောက်ခံရေးသားဖို့လည်း ၀န်မလေးပါဘူး။ သူတို့ကို မုန်းတီးစိတ်လည်း မရှိသလို၊ တိုက်ခိုက်လိုလို့ရေးနေတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ရေးတော့ ရေးရလိမ့်မယ်။ ဒါ သမိုင်းပါ။ ပြည်သူ သိသင့်သိအပ်တဲ့ သမိုင်းပါ။ ကျနော့်အနေနဲ့တော့ ရေးရမယ်။ ဆုံးဖြတ်တာ ပြည်သူ့အလုပ်ပါ။
နယူးယောက်ခ် ပွဲမှာ လွမ်းစိမ့် လာကြည့်တော့ လွတ်လပ်တဲ့နယ်မြေမှာ လွတ်လပ်စွာ ကားရိုက်ပါဦး လို့ ကိုမိုးသီး က ပြောရင်း၊ မင်းသားလိုရင်ပြော လို့ အရွှန်းဖေါက်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျနော်ကလည်း ကိုမိုးသီးရေ. . မင်းသား မဖြစ်ဘဲ၊ လူကြမ်းဖြစ်နေမယ် လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူနဲ့ကျနော် ဆုံဖို့လည်း ပြောထားပါသေးတယ်။ မအားတာနဲ့ကို မဆုံဖြစ်ပါဘူး။ ဆုံလည်း ဆုံချင် စကားစမြီလည်းပြောချင်
လူတိုင်းကတော့ မင်းသားဖြစ်ချင်တယ်။ အနည်းဆုံး ကိုယ့်ဇာတ်လမ်းမှာ။ ဒါပေမယ့် မင်းသား ဆိုတာ မင်းသားကာရိုက်တာ တော့ ရှိရလိမ့်မယ် ဆိုတာ မမေ့စေချင်ဘူး။
ကျနော် ခင်ဗျားတို့အတွက် အကောင်းဆုံး ဇာတ်ညွန်းရေးကြည့်တယ်။
( ချိုတူးဇော် )
Posted by ခွပ်ဒေါင်းအော်သံ at 5:34 PM No comments:
Posted by ခွပ်ဒေါင်းအော်သံ at 8:10 AM No comments:
အဓိကက သေတဲ့လူကသေပြီးသွားပြီ။ သေတဲ့လူကပြန်မရှင်တော့ဘူး..ဒါပေမဲ့ ဖြစ်ရပ်အမှန်ကတော့ အမှန်အတိုင်းပေါ်ပေါက်စေချင်တယ်...။
ကျဆုံးသွားတဲ့လူတွေက မြေပေါ်မှာရှိစဉ်ကတည်းက လက်တွဲခဲ့ဖူးတဲ့လူတွေ၊ သူတို့က ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှာ တကယ်ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူတွေ၊အဓိကက ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကာလတခုမှာ သူ့ကိုယ်မယုံ၊ကိုယ့်သူမယုံနဲ့ သံသယတွေနဲ့ အလုပ်တူလုပ်နေချင်းတူတာတောင် ဘယ်သူကထောက်လှမ်းရေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့၊ ဘယ်သူကသတင်းပေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုတဲ့ဟာကိုမြေပေါ်မှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။
တောတွင်းမှာ လက်နက်ကိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာဆိုတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။
သံသယရဲ့ဓါးစာခံတွေ သားကောင်တွေ ဖြစ်သွားတယ်။ ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ စနစ်ဆိုးကြီးတခုကြောင့်မို့လို့ စတေးခံလိုက်ရတဲ့ သားကောင်တွေအဖြစ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။
ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ ပြဿနာကြီးဟာ ဒီကိစ္စမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဖြေရှင်းရမှာအမှန်ပဲ။ ဒါသူတို့တာဝန်ယူရမှာ။ ကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့သူတို့ကကျောင်းသားတွေပဲလေ။ လူတွေပါဒီလောက်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးခံစားခဲ့ကြရပြီးပြီ။သေဆုံးခဲ့ကြရပြီးပြီ။ နောက်ပိုင်းမှာ ဖောက်ပြန်လို့၊ ထောက်လှမ်းရေးမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ထပ်ပြီးလုပ်ကြံခံရတာကိုတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့မြင်တယ်။ အဓိကကတော့ ဒီလောက်အကျယ်တ၀င့်ဖြစ်ဖို့တောင်မလိုဘူး။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး နင့်နင့်နည်းနည်းခံစားခဲ့ကြရတဲ့လူတွေက၊ ဒီလူတွေကထောက်လှမ်းရေးကမဟုတ်ဘူး၊ခေတ်ကာလအခြေအနေမှာ မှားယွင်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။
အဲဒီအတွက် သူတို့ဟာစတေးခံခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာလောက် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ရင်တောင်မှ သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေအားလုံးကနည်းနည်းသက်သာမဲ့၊ စိတ်ခံစားမှုဖြေလျော့မယ့်သဘောရှိတယ်။
ဒီအပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘယ်သူ့ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကိစ္စဟာ မှန်မှန်ကန်ကန်တော့ ဖော်ထုတ်ဖို့လိုတယ်။ ဒီလူတွေဟာ ခေတ်ဆိုးစနစ်ဆိုးတခုထဲမှာ သူတို့ဓါးစာခံဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူလည်းသေသေး၊နာမည်လည်းသေ၊နိုင်ငံရေးလည်း အသတ်ခံရတဲ့ဟာမျိုးက တကယ်အသတ်ခံရတာထက်ပိုဆိုးတယ်။အဲဒါမျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူးလို့မြင်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် ဘယ်သူ့ဘယ်သူကိုမှနစ်နာတာ၊ထိခိုက်တာကိုမလိုလားဘူး။
ပေါ်ပေါက်ဖို့က လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ကျွန်တော်တို့က တချို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အပြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်မှ ခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒါတွေကမေ့ပစ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ Forgive(ခွင့်လွှတ်မှု)လုပ်နိုင်တယ်။ Forget (မေ့ပစ်ခြင်း) လုပ်လို့မရဘူး။ဒါတွေက သမိုင်းမှာ ဒါတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကျန်ခဲ့ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။
ကိုယ့်ဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာကျမှ ဒါကြီးကိုဖုံးကွယ်ပစ်လိုက်ဖို့ မဖြစ်သင့်ဘူး။
ကိုယ်တွေဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရဲရဲရင့်ရင့်ဖော်ထုတ်တာမျိုး၊တာဝန်ယူတာမျိုးတော့ ကိုယ်ကနမူနာ ဖြစ်သင့်တယ်လို့မြင်တယ်။
Posted by ခွပ်ဒေါင်းအော်သံ at 8:57 AM No comments:
ပြည်ထောင်စုနေ့သတ်ဖြတ်မှုကြီး ( ထက်အောင် )
မိုးသီးဇွန်၊ နိုင်အောင်နှင့်ကျောင်းသားအချင်းချင်းတောထဲမှာ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့ လူသတ်သမားတွေ ပြန်တော်ပြန်မယ်ဆိုတော့ လုံးဝ လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါ။ AB မြောက်ပိုင်းက ကိုထွန်းအောင်ကျော် အသတ်ခံရတဲ့ကိစ္စ၊ တောင်ပိုင်းမှာ ကိုဌေးတင့်ညီ ကိုဌေးနိုင် အသတ်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ။...
မနန်းအောင်ထွေးကြည်တို့၊ မခင်ချိုဦးတို့ကို ဘယ်လိုညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက် ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကို လူထုကြားထဲမှာ အမှန်တကယ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ လက်မရွံ့လူသတ်သမားတွေ အဲဒီအချိန်မှာ ဥက္ကဋ္ဌရူး ရူးနေကြတဲ့သူတွေ တာဝန်မရှိဘူးလားလို့ မေးစရာရှိတယ်။ကျောင်းသားတွေရဲ့ သမိုင်းမှာ ဒီလိုကျောင်းသားအချင်းချင်း ရာဇ၀တ်မှုတွေကို လူမဆန်စွာ ကျုးလွန်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကို ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းက ဒီအတိုင်းပဲ လက်ပိုက်ကြည့်နေကြမယ် ဆိုရင် ရာဇ၀င်တော်တော်ရိုင်းသွားမယ်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးကြောင့် ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံကြီး မှာ တောခိုသွားခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေတော်တော်များများရှိတယ်။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး လမ်းကိုရွေးချယ်သွားခဲ့ကြတဲ့သူတွေ အောင်မြင်ခဲ့လို့လား။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကျော် သူတို့တွေ ဘာတွေလုပ်နေခဲ့သလဲ။ ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ဖို့လိုပြီ။ အရင်ရောက်တဲ့သူက နောက်ရောက်တဲ့သူကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အနိုင်ကျင့်၊ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေက ထောက်ပံ့ကြေးတွေယူ၊ ငွေအလွဲသုံးစားမှုတွေ ကျူးလွန်၊ လူသတ်မှုတွေကျူးလွန်ကြတယ်။ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးအတွက် ဘာတွေများ လောက်လောက်လားလားလုပ်ခဲ့ကြသလဲ။ တိုင်းပြည် ခုလိုအခြေအနေကိုရောက်လာမှ ဒီလူတွေ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပြန်လာမှာလဲ၊ တိုင်းပြည်နဲ့ကော တန်သေးလို့လား။ သိပ်ကိုရွံစရာကောင်းပြီး သိပ်ကိုရှက်စရာကောင်းတယ်။ ဒီမိုကရေစီလို့ အော်အော်နေပြီး အာဏာရှင်ထက်ဆိုးတဲ့ သူတောင်းစား သာသာအဆင့်ပဲရှိတယ်။ ဘယ်လိုညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ကြတယ်ဆိုတာ နဲနဲလေးပဲ ပြောပြမယ်။
မခင်ချိုဦးဆိုရင် မိန်းမကိုယ်ထဲကို တံစို့နဲ့အထိုးခံရတယ်။ အဆိပ်တွေထည့်ပြီးတော့ မွှေနှောက်ရှာတယ်။ သားအိမ်ထဲအထိ နှိုက်ပြီးရှာခဲ့တယ်။ တကိုယ်လုံးချွတ်ပြီးတော့ ခေါင်းလေးပဲဖော်ပြီး မြေကြီးထဲကိုမြှုပ်ထားတယ်။ ဒီအလုပ်တွေက ကျောင်းသားတွေလုပ်တဲ့ အလုပ်လားဆိုတာ ပြန်လည်စဉ်းစားကြည့်စေချင်တယ်။ ဘင်္ဂလီထက်တောင်ဆိုးတဲ့ သားစားဘီလူး တွေပါပဲ။ နိုင်အောင်၊ အောင်နိုင်၊ မျိုးဝင်း၊ သံချောင်း၊ လှဆိုင်းတို့နဲ့ သူတို့ရဲ့ အပေါင်းအပါးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ သန်းဇော်၊ ဇော်ဇော်မင်း၊ ကျော်ထင်ဦး၊ သက်လင်း၊ ဖိုးနှောင်းတို့က လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် ကျောင်းသားလူငယ်အချင်းချင်းတွေ အပေါ် ဇာတ်တူသားစားပြီး လုပ်ခဲ့ကိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပုံတွေဟာ နောင်မျိုးဆက်တွေအတွက်တော့ ခေတ်သစ်ဖက်ဆစ်တွေလိုပါပဲ။
အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူသတ်ပွဲကြီး ကျင်းပတဲ့ ရက်ကတော့ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂) ရက် ပြည်ထောင်စုနေ့ပါ။ အဖြစ်အပျက်ကြီး ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက် စွန်း ဝေးလံသီခေါင်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ တရုတ်ပြည်နယ်စပ် မြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တရားဆိုတာ ကြာရှည်ဖုံးကွယ်ထားလို့မရပါဘူး။ ဒီကနေ့အထိ ပါဝင်ပက်သက်ခဲ့သူတွေ အများအပြား သက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြပါတယ်။ ဘယ်သူတွေအဖမ်းခံခဲ့ရတယ်၊ ဘယ်လိုအစွပ်စွဲခံခဲ့ ကြရတယ်၊ ဘယ်သူကနှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းမှုတွေကို ရက်ရက်စက်စက်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ဘယ်သူတွေက ညှာတာမှုရှိတယ်၊ ဘယ်သူကဘယ်လို အနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတယ်၊ အနှိပ်စက်ခံနေရရင်း ဘယ်သူသေသွား တယ်၊ ဘယ်သူက လက်ပြတ်သွားတယ်၊ ဘယ်သူက ခြေပြတ်သွားတယ်၊ ဘယ်သူ့ကို ကားစင်တင်ရာ မှာ ကြိုးနဲ့ချည်ပြီးတင်တယ်၊ ဘယ်သူ့ကို ကားစင်ပေါ်မှာ သံချောင်းတွေနဲ့ မီးရှို့တယ်၊ ဘယ်သူတွေက ဘယ်သူ့အသားကို မြေမြှုပ်ပြီးမှ ပြန်ဖော်ပြီး စားခဲ့ကြတယ်၊ ဘယ်သူကတော့ဖြင့် နံချပ်ကူ အရိုက်ကျင့်တာခံရလို့ အသက်ထွက်သွားခဲ့ရတယ်၊ ပြည်ထောင်စုနေ့ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူသတ်ပွဲမှာ ဘယ်သူကသေဒဏ်အမိန့်စာဖတ်တယ်၊ သေဒဏ်အပေးခံရတဲ့လူတွေက ဘာတွေ ပြန်ပြောကြတယ်၊ လူသတ်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့သူတွေက ဘယ်သူတွေ၊ ဘယ်သူ့ကို ဓားနဲ့ ဘယ်နှချက် ခုတ်သတ်ရတယ်၊ ဘယ်သူ့ကိုတော့ ဓားအပြင် ပေါက်ပြားနဲ့ ခုတ်ခဲ့တယ်၊ ဘယ်သူ့ကို သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခဲ့တယ်၊ အသတ်ခံရမည့် အမျိုးသမီးကို ဘယ်လိုအရှက်တကွဲဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့ကြတယ်၊ ဘယ်သူတွေက လုပ်ခဲ့ကြတယ်၊ သေသွားပြီးတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့အလောင်းကို ဘယ်သူက ဘယ်လိုမဖွယ်မရာတွေ လုပ်ခဲ့တယ်၊ အလောင်းတွေကိုကျင်း ဘယ်နှကျင်းတူးပြီး တစ်ကျင်းစီမှာ ဘယ်နှယောက်စီ မြှပ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကို တိတိကျကျ ပြောနိုင်တဲ့သူတွေ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြတယ်။
ဒီကနေ့လက်ကျန် ABSDF အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီး သံခဲရဲ့ဇနီး ခင်ဆွေလှိုင်နဲ့ ယခင် ABSDF(NB) က စစ်ရေးတာဝန်ခံ သံချောင်းရဲ့ အကူရဲဘော်လုပ်ခဲ့တဲ့ မိုးညှင်းသား ကျော်ခိုင်ဝင်းတို့ဟာ ပြည်ထောင်စုနေ့ လူသတ်ပွဲရဲ့ အဓိက မျက်မြင်သက်သေတွေပါပဲ။တရားကိုနတ်စောင့်ပါတယ်။ တချိန်တုန်းက အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့မှာ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျောင်းသားတပ်မတော်ကြီးက တော့ သမိုင်းဝင်သွားအောင် ကျောင်းသား (၁၅) ယောက်ကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် အဲဒီ့နေ့မှာပဲ သတ်ပြစ်ခဲ့တယ်။ အခု အဲဒီလူသတ်တရားခံတွေ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို ပြန်လာကြတော့မယ်…။ ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်သင့်သလဲ၊ ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ၊ အမှန်တရားဘက်က တိုက်ပွဲဝင်ကြ ရမယ်။ အမှန်တရားဘက်က တိုက်ပွဲဝင်ကြရမယ်။ အမှန်တရားဘက်က တိုက်ပွဲဝင်ကြရမယ်။AB မြောက်ပိုင်းမှ ကိုထွန်းအောင်ကျော်နှင့်အတူကျဆုံးသွားသော ကျောင်းသားရဲဘော်များနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီး တစ်လျှောက် အသက်ပေးသွားသောရဟန်းရှင်လူ
(နံနက် ၁း၁၀ မိနစ်) ၂၈.၈.၂၀၁၂
Posted by ခွပ်ဒေါင်းအော်သံ at 9:42 AM No comments:
ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF(NB) ကျောင်းသားများကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဆိုသူများအား တရားစွဲမည်
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ် ကျော်က မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး၊ အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် (မြောက်ပိုင်း) စခန်းအကျဉ်းထောင်၌ မတရားစွပ်စွဲ၍ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း ခံခဲ့ရသူများက လူသတ်တရားခံအား တရားစွဲဆိုမှုများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းကိစ္စတွင် ကိုယ်တိုင် ဖြတ်သန်းပါဝင်ခဲ့သူတချို့က မြန်မာ အင်ဒီပဲန်ဒင့်သို့ ပြောသည်။
၁၉၉၂ခုနှစ်က ကချင်ပြည်နယ်၊ ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ပါဂျောင်ဒေသရှိ အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်(မြောက်ပိုင်း) စခန်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြည်ထောင် စုနေ့ အစုလိုက် အပြုံလိုက် လူသတ်ပွဲ ကြီး၏ တရားခံကို ထိုစဉ်ကထွက် ပြေး လွတ်မြောက်လာသူများထဲမှ ကျန်ရစ်သူတချို့နှင့် ယင်းတို့၏ မိသားစုဝင်များက တရားစွဲဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ထိုစဉ်က ကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းပါဝင်ခဲ့ သူ တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုညီညီက သြဂုတ် ၂၆ ရက် မြန်မာအင်ဒီပဲန်ဒင့်နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ယခုလိုပြောသည်။
““အကျဉ်းသားတွေကို ဆီးသွား ခိုင်းပြီး ကိုယ်သွားထားတဲ့ ဆီးကိုပြန် သောက်ခိုင်းတာတွေ၊ နံနှိမ်တာတွေ၊ ဆဲဆိုတာတွေ၊ ဘာမဟုတ်တဲ့ပြစ်ချက် ကလေးတွေနဲ့ ရိုက်နှက်ပြီးတော့မှ သေတဲ့အထိ အပြစ်ပေးတာတွေ၊ ဘာ စည်းမျဉ်း ဘာဥပဒေမှမရှိဘူး၊ သူတို့ လူတစ်ယောက်က ရိုက်လိုက်လို့ သေ သွားလို့ရှိရင် ဒီကောင်တွေ သေအေး တာပဲဒီလိုပြောတာ။ ဒီနေရာမှာရပ်နေ ဆိုလှုပ်လို့မရတော့ဘူး။ နောက်ဆုံး အဆင့် ညအိပ်ရာဝင်တဲ့အခါမှာတောင် လက်ကြိုးတုပ် ခြေထောက်ကြိုးတုပ် ပြီးတာတောင် တောင်ဘက် မြောက် ဘက်မလှည့်ရဘူး။ စကားပြောမှာစိုး လို့ဆိုပြီးပါးစပ်ထဲမှာ ၀ါးခြမ်းပြားကို ထောက်ထားတာ””ဟု ညှဉ်းပန်းနှိပ် စက်ခံရသည့် အဖြစ်အပျက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ယင်းကပြောသည်။
““ရုပ်ပိုင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုက တော့ ကမ်းကုန်ပါတယ်။ စိတ်ပိုင်း နှိပ်စက်မှုကလည်းပြင်းပါတယ်။ ဘယ် လောက်တောင်ပြင်းလဲဆိုရင် ညဘက် အိပ်နေတုန်း စစ်ဖိနပ်သံကြားရင်ကို အလိုလိုလန့်နိုးတာ။ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ရခဲ့တာပေါ့ဗျာ၊ တော်တော်များများ ကတော့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ကျန်နေဦး မှာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ သေလိုက်လို့ရ တယ်။ မသေခဲ့တာဘာလို့လဲဆိုတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အားတင်း ပြီးတော့ ငါတို့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ဒါကို ပြန်ဖော်ထုတ်ရမယ်ဆိုပြီး အားတင်း ခဲ့ရတာ””ဟု အသက်ရှင်ရန် ကြိုးစား ခဲ့ရသည့် အကြောင်းများနှင့်ပတ်သက် ၍ ကိုညီညီကဆိုသည်။
ဆက်လက်၍ ကိုညီညီကပြော ရာတွင် ယင်းတို့စခန်းတွင်းရှိစဉ်အခါ က ဗဟိုကော်မတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှ တောခိုကျောင်းသားများအား စစ်တပ် သူလျှိုထောက်လှမ်းရေးဟုစွပ်စွဲ၍ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းများ၊ ညှဉ်းပန်း သတ်ဖြတ်မှုများပြုလုပ်ရာတွင် အမျိုး မျိုးသော နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် လူသား မဆန်သော အပြုအမူများဖြင့် ပြုကျင့်ခဲ့သည်ဟုပြောသည်။ ထိုသို့ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဦးဆောင်သူမှာ ထိုစဉ်က မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦးမှဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဒေါက်တာနိုင် အောင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကြောင်း အတိ အလင်းပြောသည်။
““အဲဒီအချိန် တပ်ထဲမှာ ဒေါက်တာနိုင်အောင် ရှိသေးတယ်။ စခန်းထဲမှာရှိနေတယ်၊ သူကိုယ်တိုင် တောင် ကျွန်တော့်ကို ကိုညီခင်ဗျားက ထောက်လှမ်းရေးကဆိုတာ ကျွန်တော် မယုံဘူးလို့ အစ်အောက်ပြီး မေးသေး တယ်။ ကျွန်တော်က ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ထောက်လှမ်းရေးဟုတ်ပါ တယ်လို့ ပြောလိုက်သေးတယ်။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ အဲဒီအချိန်မှာ ထောက် လှမ်းရေး မဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောမိလို့ ဒေါက်တာနိုင်အောင်က ကိုသိန်းထွန်း ကိုလည်း ရိုက်ပြီးပြီ။ နောက်တစ်ခါ ထောက်လှမ်းရေး မဟုတ်ပါဘူးလို့ အမှန်အတိုင်းပြောလို့ ရဲဘော်ဇော်ကြီး ခေါင်းဖြတ်ခံရပြီးပြီ။ အဲဒီတော့ ထောက်လှမ်းရေးလို့ ၀န်ခံပြီးသားလူ တွေဟာ ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်ပါ ဘူးလို့ ထပ်ပြောတာ အင်မတန်အပြစ် ကြီးတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာရော်နယ် အောင်နိုင်လည်းအတူရှိနေတယ်””ဟု ဒေါက်တာနိုင်အောင်နှင့် ပတ်သက် သည့် အပိုင်းအားပြောသည်။
ဆက်လက်၍ ယင်းက ယခုလို ဆက်ပြောပါသေးသည်။ ““ကျွန်တော် တို့က မျက်စိမှိတ်ခံထားရတဲ့အခါ ကျတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ မမြင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်အဲဒီမတိုင်ခင် မသတ်ခင်ကတည်းက တပ်ထဲရောက် နေတယ်ဆိုတာက ကိုသိန်းထွန်းကို သတ်တဲ့ကိစ္စ၊ ကျော်စွာဝင်းမောင်ကို မိုးသီးဇွန်ထောက်လှမ်းရေးကလား ဆိုပြီးစစ်တဲ့ကိစ္စ၊ နောက်တစ်ခါ အဲဒီ အချိန်မှာပဲ ရုပ်ရှင်မင်းသား ဦးဇော်ခင် ရဲ့သားဝဏ္ဏဇော်က နိုင်အောင်ကိုမြင် ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေရှိထားတယ်။ နောက် တစ်ခါ ကိုမောင်မောင်ကနေပြီးတော့မှ ကျော်ကျော်နဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာ ကျော်ကျော်က သူ နိုင်အောင်နဲ့အတူတူ တောင်ပိုင်းကတက်လာတဲ့အကြောင်း၊ ဥက္ကဋ္ဌကြီး နိုင်အောင်ရှိတဲ့အကြောင်း ပြောတယ်။ အဲဒီအချက်တွေအရ နိုင် အောင်ရှိကြောင်း ကျွန်တော်သိရ တယ်”” ဟု ထိုစဉ်က လူသတ်မှုတွင် ဒေါက်တာနိုင်အောင်ရှိခဲ့သည့် အ ကြောင်းကို ပြောသည်။
ယင်းတို့အနေဖြင့် မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ ပြည်ထောင်စုနေ့လူသတ် တရားခံအစစ်အမှန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက် တစ်တပ်ဦးမှ ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာနိုင် အောင်သာလျှင်ဖြစ်ကြောင်း အတိ အလင်းပြောသည်။ သို့ပါသောကြောင့် ယခုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေါက်တာ နိုင်အောင်အပေါ်ထားရှိသည့် ယင်း တို့၏ သဘောထားအား ယခုလို ဖြည့် စွက်ပြောပါသေးသည်။
““တကယ်တော့သူဟာလူသတ် တရားခံရာဇ၀တ်ကောင် တစ်ယောက် ပါပဲ။ နာဇီပါတီရဲ့လုပ်ရပ်တွေအားလုံး ကို အဒေါ့ဟစ်တလာက တာဝန်ခံရ သလို မြောက်ပိုင်းရဲ့လုပ်ရပ်တွေ အား လုံးကိုလည်း နိုင်အောင်သာ တာဝန်ခံ ရမှာဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့အား လုံးက တညီတညွတ်တည်း လက် သင့်ခံကြတယ်။ နာဇီပါတီရဲ့ရက်စက် မှုတွေ၊ သတ်ဖြတ်မှုတွေအားလုံးက သူကိုယ်တိုင်သတ်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ သူကအမိန့်ပေးတဲ့ အလုပ်ကလေးပဲ လုပ်တာ။ နိုင်အောင်က သူကိုယ်တိုင် သေနတ်ကိုင်ပြီးမသတ်လို့၊ ဓါးကိုင်ပြီး မသတ်လို့ အပြစ်မရှိပါဘူးလို့ ပြောတဲ့ စကားက တာဝန်မဲ့ပြီး၊ သူရဲဘော ကြောင်တဲ့စကားပါ။ သူက သူ မသတ်ဘူးပြောတာ၊ ရှင်းရဲတယ်တို့ မြန်မာပြည်ပြန်ဝင်လာမယ်တို့ အွန်လိုင်း ပေါ်မှာ ပြောနေတာ၊ သေချာတာက သူ့အနေနဲ့ ခေါင်းရှောင်ပြီးတော့ သူပဲ မလုပ်သလိုလိုပြောနေတယ်”” ဟု ကိုညီညီက ဆိုသည်။
ဒေါက်တာနိုင်အောင်ပြည်တွင်း ၀င်မည့်ကိစ္စတွင် နိုင်ငံတော်ပိုင်းက ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကိုညီညီကပြောရာတွင် ““နိုင်ငံတော် အစိုးရကတော့ ပေးမှာပဲလေ။ အခု အစိုးရက ကြေးကြော်ထားသလို အားလုံးကို တညီတညွတ်ထဲတစ်ပြေး ညီဆက်ဆံမယ်ဆိုတော့ သူ့ကို တရား မစွဲသေးသ၍ သူကအပြစ်မရှိဘူးလို့ ယူဆထားလို့ရတယ်။ ၀င်လာပေါ့ဗျာ ၀င်လာပြီးအိမ်တွေဘာတွေ ၀ယ်ပြီး နေပေါ့ဗျာ၊ ဒီမှာ နီးနီးနားနားနေတော့ ဖမ်းရတာလွယ်တာပေါ့။ နို့မို့ဆို အင်တာပိုလိုက်ဖမ်းနေရမယ်၊ တစ်ခု တော့ရှိတာက ရာဇ၀တ်ဘေးဆိုတာ ပြေးလို့မလွတ်ပါဘူး။ လွတ်မယ်ထင် လို့ရှိရင် ဒါဟာသက်သက်မဲ့ စိတ်ကူး ယဉ်တာမျိုးပဲဖြစ်မှာပါ””ဟု ဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ် ကျော် ၁၉၈၈ လူထုအုံကြမှုအပြီး ယုံကြည်ချက်ကြောင့် တောခိုခဲ့ကြ သည့်နိုင်ငံရေးကျောင်းသားလူငယ်လေး များအား ဒေါက်တာနိုင်အောင်၊ ရော်နယ် အောင်နိုင်၊ မျိုးဝင်း၊ သံချောင်း၊ လှဆိုင်းတို့နှင့် အပေါင်းပါများဖြစ် ကြသော သန်းဇော်၊ ဇော်ဇော်မင်း၊ ကျော်ထင်ဦး၊ သက်လင်း၊ ဖိုးနှောင်း တို့က လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကျောင်းသား လူငယ်အချင်းချင်းအပေါ် ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဟု ထိုစဉ်က အသက်မသေဘဲ လွတ်မြောက်လာ သူများ၏ ပြောပြချက်အရသိရသည်။ ယခုအခါတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ကြီးက သဘောထားအမြင်မတူသည့် အတွက် ပြည်ပကို ရောက်ရှိနေကြသည့် သူများသာမက လက်နက်စွဲကိုင် တော်လှန်ရေး လုပ်ခဲ့သူများကိုပါ နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း များတွင် လက်တွဲပါဝင်နိုင်ရန် ပြည် တွင်းသို့ပြန်လာနိုင်ကြောင်း ဖိတ်ခေါ် ထားသည်။
ထိုသို့ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည်ဝင် ရောက်ခွင့်ပြုထားသည့်အတွက် ထို စဉ်က မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်း သားများဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦးမှ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတချို့လည်း ပြည် တွင်းသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်မည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေသည့်အတွက် ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ထိုစဉ်က ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရ သူများအနက်မှ အသက်မသေဘဲ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတချို့ နှင့်အသတ်ခံခဲ့ရသည့် မိသားစုအသိုင်း အ၀ိုင်းတချို့မှ ကျေနပ်မှုမရှိသည့် အတွက် အထက်ပါအမှုကျူးလွန်ခဲ့ သူများကို လူသတ်တရားခံအဖြစ် သတ်မှတ်ကာ တရားစွဲဆိုမှုများပြု လုပ်သွားမည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မတရား စွပ်စွဲခံရကာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရင်း သေဆုံးသွားသော ဦးစိန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့၊ မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်နေ သမီးဖြစ်သူ မစိမ့်စိမ့်သူမှ ယင်း၏ ဖခင် သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သက် ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲစခန်း၌ ယခုနှစ် သြဂုတ် ၂၀ ရက်တွင် (ပမ-၈၆၉/ ၁၂)ဖြင့် အမှုဖွင့် တိုင်ကြားထား ကြောင်း သိရသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍လည်း မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက် တစ် တပ်ဦး (မြောက်ပိုင်း)ကျောင်း သား ရဲဘော်ဟောင်းများက ထောက် ခံကြိုဆိုကြောင်း သဘောထားထုတ် ပြန် ကြေညာထားသည်။
ထိုစဉ်က ယုံကြည်ချက်ကြောင့် တောတွင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည့် ကျောင်း သားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန် နိုင်ငံတွင် သွားရောက်နေထိုင်နေသူ မြန်မာနိုင်ငံသား အနုပညာရှင်ပန်းချီ ထိန်လင်းကလည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခေတ္တအလည်လာစဉ် မြန်မာအင်ဒီပဲန် ဒင့်နှင့်တွေ့ဆုံ၍ ယင်း၏သဘော ထားအား ယခုလိုပြောသည်။
““ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ သတ်တာ လည်း ဟုတ်တယ်။ အစုလိုက် အပြုံ လိုက် သတ်တာလည်း ဟုတ်တယ်။ ခေါင်းဖြတ်သတ်တာလည်း ဟုတ် တယ်။ သတ်တဲ့အချိန်တုန်းက ကိုမျိုး ၀င်းရှိတယ်။ ရောနယ်အောင်နိုင်က ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတယ်။ တောင်ပိုင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာနိုင်အောင်လည်းရှိ တယ်။ သူတို့ရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ လုပ် တယ်လို့လည်း နောက်ပိုင်းမှာသိရ တယ်။ ဒါကတော့ သူတို့ရှင်းရမယ့် ကိစ္စပါ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ မြောက်ပိုင်းကိစ္စကြောင့် ပြည်ဝင်ခွင့် မပေးသင့်ပါဘူးဆိုတဲ့ သဘောထားမျိုး တော့မရှိပါဘူး။ ၀င်ချင်တယ်မ၀င်ချင် ဘူးဆိုတာကတော့ သူ့ရဲ့အခွင့်အရေး ပါ။ ၀င်ခွင့်ပေးတာ မပေးတာ၊ တရားစွဲ ရေးမစွဲရေးဆိုတာကတော့ တာဝန်ရှိ သူတွေရဲ့အလုပ်ပေါ့။ ပထမအချက်က တော့ အမှုမှန်အတိုင်း တရားသဖြင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်လာရင် ကောင်း မယ်””ဟုပန်းချီထိန်လင်းကပြောသည်။
ထို့နောက် တရားခံဟု သတ် မှတ်ခြင်းခံထားရသူများနှင့်ပတ်သက် ၍ တရားစွဲဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် ပြင်ဆင်နေမှုအပေါ် ယင်း၏သဘော ထားအား ပြောရာတွင် ““မိသားစုဝင် တချို့ရဲစခန်းမှာ စပြီးတော့အမှုဖွင့် ထားတယ်လို့ကြားပါတယ်။ တရားရုံး က လက်ခံလားလက်မခံလားတော့ မသိသေးဘူး။ ကျန်တဲ့ ရဲဘော်တွေဆီ ကလည်းသတင်းရထားတယ်။ တရား စွဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ အဲဒါသူ့အခွင့်အရေးပဲလေ။ သူ့ကို မေးကြည့်ဖူးပါတယ်။ ဘာပြောစရာရှိ လဲလို့။ သူကပြောတာတော့ သမီး တစ်ယောက်လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို လုပ်လိုက်တာပါလို့ သူကပြောပါ တယ်။ တချို့မိသားစုတွေမှာလည်း အခုထက်ထိ စိတ်ဒဏ်ရာတွေရှိနေ သေးတယ်”” ဟု မစိမ့်စိမ့်သူက အမှု ဖွင့်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပန်းချီထိန် လင်းကကိုယ်စားရှင်းလင်းပြောပြသည်။
ယင်းအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ မိသားစုဝင်များ၏ စိတ်ဒဏ်ရာရရှိနေမှု များအပေါ်တွင်လည်း လွန်စွာစိတ်မ ကောင်းဖြစ်ရပါကြောင်း၊ ကိုယ်တိုင် ဖြတ်သန်းပါဝင်ခဲ့ရသူတစ်ယောက်အနေ ဖြင့် တရားစွဲဆိုသူများဘက်မှ မားမား မတ်မတ်ရပ်တည်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရားစီရင်မှုအပိုင်းများကိုလည်း မှန်မှန်ကန်ကန်ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်စေလိုပါကြောင်း ဖြည့်စွက် ပြောပါသေးသည်။
ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများဒီမိုကရက် တစ်တပ်ဦး(မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း) ဗဟိုကော်မတီဝင် ထိုစဉ်ကကိုယ်တိုင် ဖြတ်သန်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသူ ကိုညီညီကျော် နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ရာ ယင်းက ယခု လိုပြောသည်။ ““ကျွန်တော်တို့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ သမိုင်းစဉ်မှာ လူတ ချို့ ပြည်တွင်းကို ပြန်ဝင်လာခြင်းဟာ ထူးခြားပြောင်းလဲမယ့်ကိစ္စတော့မဟုတ် ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပြည်တွင်း မှာရှိနေခြင်း၊ ပြည်ပမှာရှိနေခြင်းဟာ ပြဿနာမဟုတ်လို့ဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်။ ရင်မဆိုင်ရဲစရာ အကြောင်းဘာမှမရှိပါဘူး။ ရင်ဆိုင် တယ်ဆိုတာ တွေ့ခြင်းမတွေ့ခြင်းကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ရှင်းရှင်း ပြောရရင် သမိုင်းမှန်ကို ပြောင်းလဲ စေမယ့် တွေ့ဆုံခြင်းမျိုးဟာ လက်ခံ စရာအကြောင်းမရှိဘူး”” ဟု တရားခံ ဟုသတ်မှတ်ခြင်းခံရသူများ ပြည်တွင်း သို့ဝင်လာရန် ပြင်ဆင်နေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ယင်း၏သဘောထားကို ပြောသည်။
နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော်ကြာ ခဲ့ပြီဖြစ်သည့် မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်၊ ပါဂျောင်ဒေသ ပြည်ထောင်စုနေ့အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူသတ်ပွဲကြီးနှင့်ပတ်သက်သည့် ဖြစ်ရပ်အမှန်အား မန္တလေးမြို့ အခြေ စိုက်စာရေးဆရာမောင်မောင်ရွှေ (ရွှေကရ၀ိတ်)က“ကျွန်တော် သိသော ခေတ်သစ်ဟင်္သာကိုးသောင်းပုံပြင်” စာအုပ်တွင် သမိုင်းဆိုင်ရာအချက် အလက်များဖြင့် ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ သည်။ ယခုလည်း အဆိုပါ လူသတ် ပွဲကြီး၏ တရားခံအစစ်အမှန်အား တရားစွဲဆိုရန်နှင့် သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန် အား တင်ပြလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေးသားပြုစုထားသည့် စာရေးဆရာ ဆမားညီညီ၏ “၀ံပုလွေများထံမှလွတ် မြောက်ခြင်း”သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်စာအုပ် အား စက်တင်ဘာလ ဒုတိယအပတ်မှ စတင်၍ ထုတ်ဝေနိုင်ရန်စီစဉ်နေ ကြောင်း အဆိုပါ စာရေးဆရာက မြန်မာအင်ဒီပဲန်ဒင့်သို့ ပြောသည်။
၁၉၉၂ ခုနှစ် မေ ၃၁ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သော ABSDF ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာနိုင်အောင်၏ သတင်းစာ ထုတ်ပြန်ချက်(အင်္ဂလိပ်ဘာသာ)တွင် ယင်းအနေဖြင့် သူလျှို ၁၅ ဦးအား ကွပ်မျက်ခဲ့သည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက် ၍ မှန်ကန်မှုရှိခြင်းအား ထပ်မံ အငြင်း မပွားလိုတော့ကြောင်း၊ ယင်းကိစ္စအား ဗဟိုကော်မတီက ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ယင်းအနေဖြင့် ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့သော် လည်း ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးအနေဖြင့် ဗဟို ကော်မတီကိုယ်စား တာဝန်ရှိသည်ဟု ဆိုပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ အသိုင်း အ၀ိုင်းအားလည်း ကျန်ရှိနေသေးသည့် ထိန်းသိမ်းခံ သူလျှိုများအရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အပြုသဘောဆောင် သော ဖြေရှင်းနည်းများဖြင့် ဖြေရှင်း သွားနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားသင့်သည် ကို သိပါသည်ဟု ရှင်းပြလိုကြောင်း စသည်ဖြင့် ရေးသားဖော်ပြလက်မှတ်ရေး ထိုးထားပါသည်။ http://www.myanmarij.com/?p=5045
Posted by ခွပ်ဒေါင်းအော်သံ at 3:31 AM No comments:
ပြည်တွင်း ပြည်ပမှာ ကျင်းပကြသော အနှစ် ၂၀ မြောက် အမှတ်တရပွဲများ
ကြွေလွင့်သွားသောကျောင်းသားများအမှတ်တရပွဲမှာ ကိုယ်တွေ့ ပြောပြခြင်းများ။
မန္တလေး အမှတ်တရပွဲမှာ ပြသသော သရုပ်ဖေါ်ပြကွက်
မန္တလေး အမှတ်တရပွဲမှာ ကိုရဲလင်းအားမေးမြန်းခြင်း
မြောက်ပိုင်း လူသတ်မှု့ကိစ္စအတွက် တပ်ရင်းမှူးကိုသိုက်ထွန်းဦးနဲ့ ထိန်လင်း ဆွေးနွေးခြင်း..
".... မေတ္တာရပ်ခံချက် ...."
မင်းတို့ဉာဏ်အမြင် တစ်မိုက်တစ်ထွာမျှရယ်နဲ့ ငြင်းဖိ...